Klioba baolina kitra 20 manankarena indrindra eran-tany 2022 - Victor Mochere
Mahagaga ny vola amin'ny baolina kitra. Na mijery ny karaman'ny mpilalao ianao, ny tsenan'ny filokana amin'ny baolina kitra na ny vola loka, ny vola no manjaka amin'ny lalao maoderina. Io no fanatanjahan-tena malaza indrindra eto an-tany miaraka amin'ireo mpankafy any amin'ny firenena rehetra ary miantsoantso ny mpanohana mba hampifandray ny marika amin'ireo fifaninanana sy ekipa lehibe indrindra. Ny klioban'ny baolina kitra manankarena indrindra dia manana fifanarahana ara-bola mahasoa sy tobim-panohanana marobe manerana an'izao tontolo izao. Ny zava-bitany dia ambony indrindra, ary matetika izy ireo no miezaka ny hanana mpilalao tsara indrindra.
Ireto ny klioba baolina kitra 20 manankarena indrindra eran-tany.
€ 644.9 tapitrisa
€ 640.7 tapitrisa
€ 611.4 tapitrisa
€ 582.1 tapitrisa
Tafaray i Manchester
€ 558 tapitrisa
€ 556.2 tapitrisa
€ 550.4 tapitrisa
€ 493.1 tapitrisa
€ 433.5 tapitrisa
€ 406.2 tapitrisa
€ 366.5 tapitrisa
€ 337.6 tapitrisa
€ 332.8 tapitrisa
€ 330.9 tapitrisa
€ 255.5 tapitrisa
€ 221.5 tapitrisa
€ 219.2 tapitrisa
€ 218.1 tapitrisa
€ 212 tapitrisa
€ 207.3 tapitrisa
Atleta 10 be karama indrindra eran-tany 2022
Kaodin'ny sampana Kenya Commercial Bank (KCB) 2022